कम से कम एक व्यक्ति जो आफ्नो जीवन मा एक चकलेट को रूप मा चकलेट को रूप मा आयो। यस अवस्थामा प्रत्येकले यस राज्यलाई विभिन्न तरिकामा वर्णन गर्दछ। कसैले सोच्दछ कि सबै वस्तुहरू स्पिन सुरू गर्न सुरु हुन्छ; कसैलाई सन्तुलन अचानक गुमाएको छ भन्ने लाग्छ; र सामान्यतया कोही मानसिक रूपमा उडानमा पठाइयो। प्रायः यो घटनाले थोरै कमजोरी, कमजोरी, उल्टी र आँखामा घोरिरहेको छ।
अचानक छाती: कारण
अचानक चकलेटको मुख्य र प्रायः तत्काल कारण शरीरको स्थितिमा तेज परिवर्तन हो। यो अवस्था न केवल भित्री तंत्र द्वारा नियंत्रित गरिन्छ , तर मांसपेशी रिसेप्टर्स र भिजुअल विश्लेषकहरु द्वारा। त्यसोभए, अतिरिक्त प्रभावहरू लिइएका छन्, जस्तै आँखाको घिमिरे र मांसपेशिहरु मा कमजोरी। तर नबिर्सनुहोस् कि हाम्रो धारणाका सबै उपरोक्त "नियन्त्रकहरू" हाम्रो शरीरमा मुख्य अंगको विषय हुन् - दिमाग।
त्यहाँ धेरै प्रकारका ठाडो छ, जसको प्रत्येकको आफ्नै महत्त्वपूर्ण कारण हो। तथापि, सबैभन्दा सामान्य कारणहरू मध्य र बाह्य हुन्। यी मध्ये पहिले विकार र मस्तिष्कको चोटहरूको परिणाम हो, र दोस्रोले भित्री उपकरणको उल्लङ्घनको साथ हुन्छ।
चक्कीपन को कार्यात्मक कारणहरु
धेरै व्यक्ति अचानक चकित कारणहरूको कारणमा चासो राख्छन्, किनकी हामी सबै मध्ये एक चोटि एक पटक यस्तो परिस्थितिको सामना गर्नु पर्यो।
प्रायः एकदम स्वस्थ व्यक्ति पनि एक राज्य अनुभव गर्न सक्छन् जब सबै केहि कताई कताईन्छ, र कमजोरी शरीरमा देखिन्छ। टाउको लामो ढोका वा बस्छ, साथै ती टाउको टाउकोमा झुन्ड्याउँछ र झन्डै पछि स्पिन गर्न सुरु हुन सक्छ। यस्तो स्थितिले तपाईंको शरीर केही सेकेन्ड पछि छोड्छ, तर अप्रिय संवेदना अझै पनि रहन सक्छ। केही मानिसहरू कानमा शोर बनाउन सुरु गर्न सक्छन्, वा आँखामा गाढा। ती असरहरू धमनीहरू र रेजहरूसँग रगतको पुनरुत्थानको परिणामको रूपमा बनाइन्छ।
खराबीको कारण, शरीरको स्थितिमा परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित छैन
अचानक चकलेटको कारण पनि छन्, तपाईं कसरी शरीरको स्थिति परिवर्तन गर्न कसरी सम्बन्धित छैन। यहाँ तपाईं समावेश गर्न सक्नुहुन्छ:
शरीरमा एक सानो मात्रामा पोषक तत्व र भिटामिनको सेवन गर्नुहोस्;
नींद र अधिक कार्यको निरन्तरता;
रगतमा हेमोग्लोबिनको स्तरमा तीव्र कमी (प्रायः यो अवस्था गर्भवती महिलाहरुमा, साथै मासिकरुपमा महिलाहरु मा देखिएको छ)।
अचानक चकलेटको माथिको सबै कारण मस्तिष्कमा सानो मात्रामा ओक्सीजनको परिणाम हो। यसैले, मानव मस्तिष्क लोड संग सामना गर्न सक्दैन, र यसैले शरीर कमजोरी छ, टाउको कताई सुरु हुन्छ, ब्यालेन्स हराएको हुन्छ, र हृदयले यति छिटो हराएको छैन।
यस्तो समस्या सामना गर्न को लागी, तपाईं दैनिक दैनिक तयारी गर्न आवश्यक छ। खेलहरूको लागि जानुहोस्, प्राय: हावा हावामा हिँड्नुहोस्, सही खाऊ र बस आराम गर्नुहोस्।
भिटामिनको ठूलो मात्रा खपत गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं सक्रिय भिटामिन परिसरहरू पिउन सक्नुहुन्छ।
अचानक चकलेटको कारण रक्तचापमा परिवर्तन हुन सक्छ। आखिर, यो घटनाले दिमागमा रक्त आपूर्तिलाई असर गर्छ । प्राय: अन्य घटना कम दबावको अधीनमा हुन्छ:
सामान्य कमजोरी र छालाको छाला ;
त्यहाँ एक हुन सक्छ कि पर्याप्त हावा छैन;
प्रायः शरीर शरीर अत्यधिक पसीना गर्न सुरु हुन्छ;
कहिलेकाँही त्यहाँ अल्पविरामहरू छन्।
बढ्दो दबाबले यस्ता चिन्हहरूद्वारा विशेषता दिएको छ:
मन्दिरहरूमा गम्भीर पीडा;
अनुहार जलिरहेको छ कि सनसनी;
गर्दनको नापमा टाउको दुख्न सक्छ।
निस्सन्देह, रक्तचाप जम्प संग सम्बन्धित रोगहरूको उपचार गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। यसैले पहिलो लक्षणहरूमा अस्पताललाई तुरुन्तै जान आवश्यक छ। यद्यपि, यदि रक्तचापमा परिवर्तनले तपाईंलाई अत्यन्तै कम तुल्याउँछ, त्यसपछि कम दबावको मुनि तपाईं मीठो चिया पिउन सक्नुहुनेछ र वृद्धिको साथमा एक जिज्ञासा। यस अवस्थामा, केवल आफैलाई फेरि सामान्य रूपमा नेतृत्व गर्न, यो एक स्वस्थ जीवनशैलीको नेतृत्व गर्न पर्याप्त छ।
भित्री उपकरण संग समस्याहरु
अचानक चकित र विषाणु, जसको कारण धेरै विविध हुन सक्छ, प्रायः मानिसहरु जसले भित्री उपकरण या कानको रोगहरू भेट्न जान्छन्।
यस्तो रोगहरूमा ध्यान दिनुहोस्, जो अचानक चक्कर आउँछ अक्सर।
Vestibular neuritis । यो बीमारी vestibulocchlear तंत्रिका को सूजन द्वारा विशेषता हो। यस्तो रोगको मुख्य लक्षण अचानक छ, तर धेरै पटक चक्कर आउँछ, जुन हानि सुन्न छैन। साथै, बिरामीहरू अक्सर विलक्षण र उल्टीबाट ग्रस्त छन्। सामान्यतया यो रोगले आफैले पास हुन्छ। आवश्यक औषधिको लागी एक मात्र चीज जो विषाणु र चक्कीपन को भावना को खत्म गर्न मा मदद गर्दछ।
शीर्षक रोग मध्य कानको सूजन द्वारा विशेषता हो। यदि तपाई अचानक गंभीर चकित कारणहरूको कारण वर्णन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि कानको रोग अन्तिम स्थानमा छैन। यस बीमारीको सामान्य लक्षणहरू कानमा कडा दुखाइ हो, यसको निर्वहन, शरीरको तापमान बढाउँदछ, र सुन्नुमा महत्त्वपूर्ण बिदा पनि। कुनै पनि अवस्थामा यस बीमारीलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन, अन्यथा त्यहाँ सुनवाईको खतरा पुरा तरिकाले छ। Otolaryngologist परामर्श गर्न निश्चित हुनुहोस्। ओटीबायोटिक्स सामान्यतया एंटीबायोटिक्ससँग उपचार गर्न सकिन्छ।
मेनीरे रोगको आन्तरिक कानलाई असर पार्छ। यसको कोर्समा, अचानक कमजोरी र चक्कर आउन सक्छ, जसको कारण एक कानुनी कान सूजनमा आवरण गरिन्छ। यस रोगको सामान्य लक्षणहरू कानमा गम्भीर दुखाइ, रिंग र शोरमा व्यक्त गरिएको छ। कहिलेकाँही, सुन्नु महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यस रोगलाई उपचार गर्न सकिँदैन, तर डाक्टर द्वारा निर्धारित विशेष औषधिको मद्दतले तपाइँ लक्षणहरूको निष्कर्षलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ।
चिसोपन भित्री उपकरण र कान संग सम्बन्धित अन्य रोगहरु को कारण पनि हुन्छ। यसमा क्षति समावेश गर्दछ टेम्पाइनिक झिल्ली र कानको आन्तरिक भागमा।
अनुहार को अचानक हमला, जसको कारण सिरदर्द को कारण नहीं, शरीर मा कमजोरी, आँखों को अंधेरे, अक्सर ज्यादातर कानहरु र ऊर्ध्वाधर तंत्रहरु संग सम्बन्धित हुन्छन्। यदि तपाइँ प्रायः यस्ता लक्षणहरू देख्नुहुन्छ भने, otolaryngologist भ्रमण गर्न निश्चित हुनुहोस्।
मस्तिष्कको चोट र रोगहरू
मस्तिष्क को धेरै रोगहरु, अचानक चक्कर आउन को लागी। तीमध्ये प्रत्येक अत्यन्त खतरनाक छ र तत्काल उपचार चाहिन्छ। तिनीहरूका केही विचार गरौं।
रोगी - मस्तिष्क को एक रोग, चेतना, आक्रोशित को लगातार हानि द्वारा विशेषता को रूप मा, साथसाथै तीव्र गति या, आक्रामक, धीमी दिल को दर। यो रोगको उपचार गर्न तपाईलाई रोगीको जीवनमा विशेष औषधि चाहिन्छ।
मस्तिष्कको ट्यूमरहरू । कडा सिरदर्द र चकलेटको नेतृत्व गर्नुहोस्। उपचारको मुख्य तरिकामा केमोथेरेपी र सर्जरी समावेश छ।
माइग्रेन एक मस्तिष्क रोग हो, जो पनि सिरदर्द र चक्कीपन संग हुन्छ। दुखाइ कम गर्न, डाक्टरहरुलाई विशेष पित्ताकर्स प्रयोग गरेर सिफारिस गर्दछ र साथै अझ राम्रो जीवनशैलीको नेतृत्व गर्न प्रयास गर्नुहोस् ।
चकलेटको अन्य कारणहरू
सामान्यतया, अचानक चकलेट बिना कारणले गर्दा कुनै डर छैन। यद्यपि, यदि टाउको प्रायः कताईरहेको छ भने, एक व्यक्तिले खराब र खराबको अनुभव गर्छ, त्यसपछि यो एक स्वास्थ्य परीक्षणको बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्ने मौका हो।
यदि तपाईं ठूलो मात्रामा फैटी र त्रिएको खाना खानुहुन्छ भने, त्यसपछि कोलेस्ट्रॉल पोतहरु को पर्खालहरुमा जमा गर्न को लागी शुरू गर्न सकिन्छ। र यो, बारी मा, यस तथ्य को नेतृत्व गर्दछ कि ओक्सीजन को अपर्याप्त मात्रा मस्तिष्क मा हुन्छ। यसैले सिरियाचोक, सन्तुलनको कमी, कमजोरी र नली।
स्ट्रोक - रक्तदान को बिरुद्ध उल्लङ्घन संग सम्बन्धित एक धेरै गंभीर बीमारी। यो न केवल चक्कर आउँछ, तर समन्वयको हानि, भाषण र सास फेर्ने समस्याहरु को लागी पनि। यो रोग मानव जीवनको लागि धेरै खतरनाक छ, त्यसैले डाक्टरहरूले सुत्न सुत्नका लागि सुत्न र आरामको बीचमा वैकल्पिक र राम्ररी खाए।
चकलेटको कारण पनि पाचन प्रणालीको रोग हुन सक्छ। चक्कर र कमजोरी गम्भीर विषाक्तताको परिणाम हुन सक्छ। यो पनि चयापचय विकार संग सम्बन्धित हुन सक्छ।
महिलाहरु मा चक्कीपन को मुख्य कारणहरु
अचानक चकितता ( यस लेखमा वर्णित स्त्रीहरूको कारण ) कमजोर सेक्सका व्यक्तिहरूमा प्रायः उमेर सम्बन्धी सम्बन्धहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन् वा शरीरमा पथहरू उपस्थित हुन्छन् भने हुन सक्छ। यस अवस्थामा, चकलेट संग समन्वय, नली, र अल्कोहल पेय पदार्थ को प्रयोग को बिना शराब विषाक्तता को भावना को पनि कमी छ। यदि यो सामान्यतया हुन्छ भने, एक महिलालाई डाक्टरसँग परामर्श गर्नु पर्दछ।
गर्भवती महिलाहरुमा चक्कीपन को एक मुख्य कारणहरु लाई मानिन्छ। यो रगतमा हेमोग्लोबिन वा ग्लुकोजको स्तरमा कमीको कारण हो। सामान्यतया गर्भावस्थाको प्रारम्भिक चरणहरूमा, धेरै महिलाहरु अक्सर चक्करपनाको शिकायत गर्छन्। यद्यपि, यो सामान्य सामान्य मानिन्छ।
यदि यस्तो अवस्थामा जारी छ र पछिको मितिहरूमा, यो सावधान रहनु सार्थक छ। विशेष गरी यसले महिलाहरु चालीस वर्ष पछि चिन्ता गर्दछ।
रजोनिवृत्तिको दौडान चिसोपन
अचानक चकितता, सन्तुलनको हानि, जसको कारण रजोनिवृत्ति संग सम्बन्धित हुन्छ, प्रायः अलार्म महिलाहरु। तथापि, यो राज्यलाई सामान्य सामान्य मानिन्छ। यस्तो अवधिमा, महिलाहरू ताजा हवामा बढी समय बिताउन प्रोत्साहित गरिन्छ, बाँकी र ठीकसँग खान। दाहिने हार्मोनल ड्रग्स प्रयोग गर्दै, तपाइँ तुरुन्तै आफ्नो अवस्था सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
पहिलो सहायता कसरी प्रदान गर्ने
यदि एक व्यक्तिको अचानक चकलेट अन्य लक्षणहरूसँग होइन, जस्तै थोरै, आँखामा घिमिरे र साँसको उल्लङ्घनको उल्लङ्घन, त्यसपछि पछाडि राख्दा क्षैतिज सतहमा शिकार राख्न पर्याप्त हुनेछ। तपाईं उच्च तकिया प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको लुगाहरू अनबाइन्ड गर्नुहोस्, सफा हावाको लागि विन्डो खोल्नुहोस्। यदि एक व्यक्ति धेरै पीला देखिन्छ, त्यसपछि उसलाई चिनोमा चिया दिनुहोस्। यदि शर्त केहि मिनेटको लागि टाढा छैन भने, तुरुन्त एम्बुलेंसको लागि कल गर्नुहोस्।
वयस्कों मा संक्रामक mononucleosis
गुर्दे कमजोरी: लक्षणहरू, नतिजाहरू र उपचार
दबाइहरु र लोक उपचार संग schizophrenia को उपचार
न्यूमुलर एक्जिमा: कारणहरु र उपचार
हेमोस्टासिस - यो के हो? हेमोस्टासिस विकार
रातो दाल कसरी खाना पकाउनु? हामी सिक्न!
स्वास्थ्य र पूरक
खाना, औषधी र सिफारिसहरू: प्रशिक्षण पछि छिटो रिकभरी
जीवनी Skryabina Aleksandra Nikolaevicha
बेलायतमा सुधार को शुरुवात: कारणहरू, मिति, को परिणाम
एक घर पृष्ठ, "Yandex" कसरी बनाउने? एक घर पृष्ठ "Yandex" स्थापना: समीक्षा
कम तापमान मा ठोस को घनघोर: उपयोगी सुझावहरू
मनोरञ्जन पोर्टल "Fishki.net": समकक्षों, दर्शक र उद्भव को कथा